नागरिकको स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य मन्त्रीको भद्दा मजाक « Bikas Times
नागरिकको स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य मन्त्रीको भद्दा मजाक
प्रकाशित मिति : 19 September, 2019
काठमाडौं । डेंगु रोग नियन्त्रणमा सरकार उदासिन देखिएको छ । देशैभरी फैलिएको डेंगुबाट पछिल्लो दुई सातामा राजधानीको भक्तपुरमा मात्रै २ सय जनामा डेंगु देखियो । मेडिकलको भाषामा यो प्रकोपको रुप हो ।
तर सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले नै नेपालमा देखिएको डेंगु सामान्य भएको बताउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले डेंगु संक्रमण आपतकालिन अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने तहसम्म नरहेको बताए ।
नेपालमा मात्रै नभई विश्वका अन्य मुलुकमा पनि डेंगुको संक्रमण देखिएको उल्लेख गर्दे उनले नेपालको डेंगु संक्रमण जटिल किसिमको नभएको दाबी गरे । डेंगु सक्रमणको झण्डै महिना दिन बित्दा नेपालका विभिन्न जिल्लामा डेंगु प्रकोपको रुपमा देखिदा पनि सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले सामान्य समस्या भएको भन्न मिल्ला की नमिल्ला ?
संविधान प्रदक्त नागरिकको अधिकार माथि सरकारको यो भन्दा ठूलो मजाक के हुन सक्छ ? प्रकोपको रुपमा फैलिएको डेंगुलाई सरकारले किन यती धेरै हलुका सँग लिएको छ । अझै स्वयम मन्त्रीले थोरै मात्र मान्छे यो रोगका कारण मरेकाले यो सामान्य हो भन्दै गर्दा सरकार नागरिक प्रती कति जिम्मेवार छ भन्ने उदाङगो पार्छ ।
के १०–१५ जना नागरिकको मृत्यु हुनु सरकारका लागि सामान्य हो ? सरकार नागरिक प्रति जवाफदेही हुन कती नागरिकको मृत्यु हुने पर्ने हो सरकार ?
ललितपुरको किष्ट अस्पतालमा कोरोनाका कारण एक जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ५ पुग्यो
ललितपुरमा कोरोना संक्रमणका कारण थप एकको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोन भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या
हाम्रा विरुद्ध सरकार गोयबल्स शैलीमा उत्रियो : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदको कार्यसुचीबाट हटाएको विषयमा सत्तापक्ष गोयबल्स शैलीमा प्रतिपक्षका विरुद्धमा उत्रिएको
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच शितल निवासमा भेटवार्ता
प्रतिनिधिसभामा बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट्न शीतलनिवास पुगेका
लकडाउनकै बीचमा हवाईमार्ग मार्फत विदेशबाट नेपाल फर्कने यी हुन ८ जना भाग्यामानी
विगत ६५ दिनदेखि कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि लकडाउन छ । लकडाउनसंगै सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय
कांग्रेस समाप्त हुन्छ तर सीमाको मामिलामा अडान फेर्दैन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संसदीय दलको कार्यालयबाट बुधबार विज्ञप्ति नै निकालेर